ONIVERSITE ESTIIM: Tafiditra amin’ny sehatry ny asa ny 80 % ny mpianatra mivoaka - ewa.mg
News - ONIVERSITE ESTIIM: Tafiditra amin’ny sehatry ny asa ny 80 % ny mpianatra mivoaka
Cet article ONIVERSITE ESTIIM: Tafiditra amin’ny sehatry ny asa ny 80 % ny mpianatra mivoaka est apparu en premier sur déliremadagascar.
L’article ONIVERSITE ESTIIM: Tafiditra amin’ny sehatry ny asa ny 80 % ny mpianatra mivoaka a été récupéré chez Délire Madagascar.
Nirodorodo teny amin’ny EPP Ambohipo indray ny ratsa-mangaika rehetra mandrafitra ny minisiteran’ny serasera sy ny kolontsaina (MSK) nanao « tagnamaro: andron’ny olom-pirenena”, ny 27 aprily 2019. Nanatevin-daharana ny hetsika ireo mpampianatra sy ny ray aman-drenin’ny mpianatra, ireo mponina ao amin’ny fokontany Ambohipo, ireo fikambanana maro toy ny Fandio, Ivoarana… Nizara ekipa maro ireo mpilatsaka an-tsitrapo ka tao no nisahana manokana ny fandokoana ny atiny sy ivelany ary ny “plafond” an’ireo efitranon-tsekoly miisa 12 amin’ny 16, ny fandokoana ny varavaran-kely sy ny varavaram-be ary ny solaitrabe, ny fandokoana ny ivelan’ny biraon’ny talen-tsekoly, ny fandokoana ny tamboho… Nisy tamin’ireo ekipa no nanala ny lobolobo manodidina ny sekoly. Tao ihany koa no nanamboatra ny zaridainan’ny sekoly tamin’ny alalan’ny fanamboarana ny fefiny, ny fambolena voninkazo vaovao. Ankehitriny, mamantana ny sekoly vaovao ireo mpianatra. Nambaran’ny talen-tsekoly, Raharimalala Fidelys Voahirana fa feno 57 taona ny sekoly. Hatramin’izay mbola tsy nisy ny fanavaozana ny EPP afa-tsy ny fanamboarana fanampina efitranon-tsekoly, novatsian’ny firenena japoney. “Mitondra fiovàna ho an’ny sekoly izao tagnamaro izao ka maneho ny fisaorana mitafotafo ny ekipan’ny minisitera sy ireo nanome tanana rehetra izahay”. Iray andro monja dia nahavita asa maro ireo mpanao tagnamaro notarihin’ny minisitry serasera sy ny kolontsaina, Rakotondrazafy Andriatongarivo Lalatiana. Ankoatra ireo tonga teny an-toerana dia nanampy ara-pitaovana ihany koa ireo orinasa sasantsasany miasa eto Madagasikara. Tsy ny teto an-drenivohitra ihany no nanao tagnamaro fa saika nahitàna hetsika avokoa nanerana ny Nosy. Ny 17 mey 2019 indray ny fotoana manaraka. Lynda A. Sary Cet article TAGNAMARO TENY AMIN’NY EPP AMBOHIPO: Mamantana sekoly vaovao ireo mpianatra est apparu en premier sur déliremadagascar.
RN44 : potika ny tetezan-kazo ao Ambatosoratra
Simba dia simba ny tetezan-kazo ao Ambatosoratra, raha ny tazana ny 14 oktobra teo.Samy mitondra hazo “madrie” ny fiara vaventy satria mety hihotsaka ny faritra sasany amin’ilay izy. Io tetezana io irery sisa no mbola tetezan-kazo amin’ny lalam-pirenena faha-44 manomboka any Moramanga ka hatrany Vohitraivo, iafarany. Tsy sahy mikasika azy ny kaominina, satria fotodrafitrasa amin’ny lalam-pirenena.Mandalo mitety eo amin’ity tetezana Ambatosoratra ity avokoa ny fiara vaventy, mavesatra, mitondra vary, hazo, saribao, sns. Andrasan’ny rehetra ny tokony hijeren’ny minisiteran’ny Fanajariana ny tany sy ny asa vaventy haingana ity fotodrafitrasa ity, ny hanovana azy ho betao, atao simenitra sy vatokely ary fasika, mba hitovy amin’ny rehetra. Marihina fa tsy anisan’ny asa atao amin’ny ampahan-dalana amin’ny RN 44, amboarina sy horakofana godirao, amin’izao fotoana izao, ity tetezan-kazo ity.Rarivo sy Njaka A.L’article RN44 : potika ny tetezan-kazo ao Ambatosoratra a été récupéré chez Newsmada.
Fanatsarana ny fanabeazana: tokony hilaza ny olana ny mpampianatra
Nandritra ny fanamarihina ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny fanabeazana, omaly, nanamarika ny minisitry ny Fanabeazana, i Sahondrarimalala Marie Michelle fa manoloana ny fiatrehana ny valanaretina Coronavirus eny anivon’ny sekoly, ny mpianatra no ambasadaoron’ny fahasalamana , manitsy ny fiarahamonina, hahafahana miroso amin’ny fampandrosoana. Tany amin’ny Lycée Andrianampoinimerina Sabotsy Namehana, Cisco Antananarivo Avaradrano no nanamarihana izany. Lohahevitra noraisina ny hoe « Mamelona ary mamelona aina ny fanabeazana ny taranaka tratran’ny Covid-19 ». Nanambara izy fa masina ny asa fanabeazana satria manasoa ireo taranaka. Noho izany, ireo mpanabe no fanasin’ity firenena ity ka maro ny zavatra mbola tokony hohatsaraina sy hampiharina, indrindra ny fijerena manokana an’ireo mpanabe . « Raisiko ho andraikitra ny hiahy ireo mpanabe tsirairay avy », hoy izy. Noho izany, tsy tokony hisalasala ny mpanabe amin’ny fampahafantarana ny zava-misy eny ifotony hahafahana manampy anareo hampisondrotra sy hanatsarana ny fomba fiasa ». Nanamafy ihany koa izy fa ilaina hatrany ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana rehetra iadiana amin’ny valanaretina.Vonjy A.L’article Fanatsarana ny fanabeazana: tokony hilaza ny olana ny mpampianatra a été récupéré chez Newsmada.
Fisaina sy fiaina… handrosoana
Taon’ny asa izao. Ho hita eo… Eny, na eo amin’ny tsirairay aza: samy manana kasaina. Tsy vitan’ny resaka sy ny hetsika ivelany izay kendrena sy atao. Mila fanapahan-kevitra, fahasahiana, fahavononana, fijoroana, firosoana, faharetana… Izy avokoa izany? Arakaraka ny tsirairay ihany ny ataony, arakaraka ny ataony ihany no mahasoa na maharatsy azy. Miainga amin’ny tsirairay ny hoe fampandrosoana sy ny fandrosoana?Efa mba miomana sy vonona amin’izay ve ny tsirairay? Miankina amin’izay no anisan’ny mahamora ny fampandrosoana, mahahaingana azy, ho mafy orina, maharitra, ho an’ny rehetra… Mila miova mialoha na manaraka ny fampandrosoana tian-katao sy hotratrarina ny fomba fisiana sy fiaina. Mety mbola adihevitra be ny hoe: ny zava-misy no manova ny fisainana sa ny fisainana no hanova ny zava-misy?Na ahoana na ahoana, mila miova amin’izay mahasoa sy tsaratsara kokoa hatrany ny tena: fandrosoana. Lanja miakatra ny fiainana. Eny, na ny fisainana aza. Raha tsy izany, manila ny fampandrosoana. Nefa hoe tsy hisy ho hadino… Mila tapa-kevitra sy vonona ny tsirairay. Tsy miandry ny rehetra ho tongan’ny herinaratra, ohatra, ny hafa vao hampiasa ordinatera. Tsy miandry ny tsy afaka na tsy handeha ny fampandrosoana.Mbola ho feno sarety na posy tarihin-tanana ihany ve, ohatra, amin’ny hoe arabe migodana, amin’ny andehanan’ny “tranway”…? Miandry valiny koa ny amin’izay mety ho fahadiovana sy fahamendrehana amin’ny fampiasana izany rehetra izany? Mila miova ny fomba fisaina sy fiaina: maharaka fandrosoana, mahazaka, mendrika. Tsy lavina, ao anatin’ny fahasahiranana lalina sy maharitra ny ankamaroan’ny olona amin’izao.Na izany aza, ndeha ho resy tsy miady amin’izay mety ho fihazakazaky ny fandrosoana ve ny tena? Izay no maha zava-dehibe ny fampandrosoana ny olona rehetra sy ny olona manontolo. Mila jerena ary tsy tokony ho ambin-javatra na ambanin-javatra ny maha olona. Mby aiza? Mila mandroso koa ny olona amin’ny fotodrafitrasa, haitao, fomba fiasa… mitondra fandrosoana.Rafaly Nd. L’article Fisaina sy fiaina… handrosoana a été récupéré chez Newsmada.
Fampanarahana lalàna: mampahatsiahy ny fepetra momba ny takelaka doka ny CUA
Fampahatsiahivana. Namoaka fanambarana ny eo anivon’ny fiadidiana ny Tanànan’Antananarivo fa hifarana ny alahady 31 janoary 2021 izao ny famerenana amin’ny ara-dalàna ireo takelaka dokam-barotra tsy ara-dalàna rehetra. « Miantso ireo mpisehatra rehetra. Anisan’izany ny mpametaka (régisseurs) na ny tompon’ny dokam-barotra (annonceurs), mba handray ireo fepetra rehetra momba izany », hoy ny CUA. Notsiahivin’izy ireo fa azo jerena amin’ity rohy ity ny lisitry ireo takelaka dokam-barotra. panneaux : www.cua.mg/regis. Hentitra ny CUA fa handray ny fepetra rehetra aorian’io fe-potoana amin’ny alahady io ho amin’ny fanasaziana. Anisan’izany ny lamandy sy ny fanesorana ireo « panneau », ary ny fiantohana ny lany rehetra amin’izany. « Miara-tompon’antoka amin’ny fanatanterahana ny sazy ny tompon’ny dokam-barotra sy ny mpametaka izany », hoy ihany ny kaominina.Notokanana ny fanavaozana ny BMH annexeAnkoatra izany, notokanana tamin’ny fomba ofisialy, omaly, ny fanavaozana ny BMH annexe, etsy Isotry. Tonga nanotrona ny lanonana ny ambasadaoron’i Alemana i Michael Derus sy ny ben’ny Tanànan’Antananarivo Renivohitra, Andriantsitohaina Naina.Anisan’ny nohavaozina tamin’izany ny efitrano fitahirizana entana miisa telo izany. Eo koa ny birao iray hafa sy trano fidiovana… Natao izany tetikasa izany mba hahafahan’ireo mpiasa manao ny asa an-tsakany sy an-davany. Naharitra iray volana sy tapany ny faharetan’ny asa fanavaozana ary mitentina 15 000 Euros ny fanampiana nomen’ny masoivoiho Alemà tamin’ny fanamboarana izany. Mbola mitohy hatrany ny ezaka fanavaozana ity tranoben’ny BMH annexe Isotry ity amin’ny alalan’ny fametrahana trano vaovao handraisana ireo ankizy iharan’ny herisetra.Synèse R. L’article Fampanarahana lalàna: mampahatsiahy ny fepetra momba ny takelaka doka ny CUA a été récupéré chez Newsmada.
Basikety-N1A 2020: fantatra ireo hiatrika ny ampahefa-dalana
Taorian’ny andro fahadimy ny fifanintsanana, amin’ny fiadiana ny tompondaka an’i Madagasikara N1A, fantatra avokoa ireo hiatrika ny lalao ampahefa-dalana, hotanterahina rahampitso etsy amin’ny lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina. Efa nampoizina avokoa ireo ekipa tafakatra, dia ireo efa azo lazaina ho sangany, raha ny fahitana ny voka-dalao hatrany am-piandohana. Isan’izany ny SBBC Boeny, izay laharana voalohany ao amin’ny vondrona misy, taorian’ny fifandonana tamin’ny COSPN2, omaly, ka nahazoan-dry Prisca sy ry Dhalia ny isa 70 no ho 57. Laharana voalohany ao amin’ny vondrona ilany, sokajy vehivavy, kosa, ny Mb2All izay nandresy ny Serasera Vakinankaratra, tamin’ny isa 69 no ho 40, omaly.Ho an’ny sokajy lehilahy, nisongadina hatrany am-piandohana ny GNBC, izay tsy mbola resy mihitsy nandritra ny fifanintsanana, torak’izany ihany koa ny ekipan’ny Ascut, Sebam, Cospn, Cosfa, Cosmos, izay samy tafakatra amin’ny ampahefa-dalana. Tsy isan’ny hanohy ny fifaninanana intsony ny BCEst, Asb, Crjs, 2bc, Ascb ary ny Tmbb. Mi.RazL’article Basikety-N1A 2020: fantatra ireo hiatrika ny ampahefa-dalana a été récupéré chez Newsmada.
Efa ofisialy fa higadona eto Madagasikara, amin’ny alahady 24 janoary ho avy izao, amin’ny 10 ora latsaka fahefany ny nofo mangatsiakan-dRafalimanana Ferdinand (Gôly Be), hotronin’ny vady aman-janany. Io no nambaran-dRafalimanana Stellah, zanaka vaviny, teny 67ha, omaly, izay efa tonga mialoha hanomana sy hikarakara ny fandevenana azy any Mandritsara. Ho feno ny fandaharam-potoana, satria handrasana etsy amin’ny kianja mitafon’i Mahamasina ny razana, ny andron’io alahady io ary azon’ny rehetra tsidihina. Hihazo an’i Mahajanga ny alatsinainy ary mbola hisy ny fiandrasana azy any an-toerana. Hanainga ary hamonjy ny fasan-drazany any Mandritsara, ny talata 26 janoary, hanaovana ny fandevenana.Nambaran’i Stellah, fa tsy nanana ny hoenti-manana izy ireo fa noho ny fanampian’ireo mpanao baolina fahiny sy ireo namana tsotra, na teto Madagasikara na tatsy La Réunion na ny tany Frantsa, dia feno ny fepetra hampodiana ny razana.Ankoatra izay, natolotry ny fikambanan’ireo mpilalao fahiny tao amin’ny ekipam-pirenena (Club M, Scorpions, Barea de Madagascar), tamin’ny alalan’i Angelo Fernand, filoha lefitra, ho an’ny fianakaviany ny vola mitentina 4 036 900 Ar , voangona tamin’ny tsipaipaika natao tetsy Andohan’Analakely sy ny azo tamin’ny rindran-kira ary ireo nalefan’ny mpankafy tamin’ny Mvola. Torcelin L’article Kitra : handrasana etsy Mahamasina ny nofo mangatsiakan’i Gôly Be a été récupéré chez Newsmada.
Fadintseranana – JID*: hampiditra 2869,1 miliara Ar, taona 2021
Nankalaza ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny fadintseranana (JID), omaly 26 janoary, tany Toamasina ny foiben’ny fitantanan-draharahan’ny fadintseranana eto Madagasikara. Notsiahivina ny fanarenana ny toekarena amin’ny alalan’ny fadintseranana hitandro ny lalàna sy hanefa izay tokony hefaina amin’ny fanjakana. Samy manana adidy araka izay tandrify azy amin’izany ny mpiasam-panjakana sy ny any amin’ny tsy miankina. Natao ny fanentanana momba izany ny tapaky ny volana janoary teto an-dRenivohitra, ary izao nampitaina any Toamasina izao ho an’ny rehetra.Raha 2187,4 miliara Ariary ny nampidirin’ny fadintseranana tamin’ny 2020, kajiana amin’ity taona ity ny hampiditra 2 869,1 miliara Ariary. Ny ampahany be indrindra amin’izany avy amin’ny entana hafarana, ankoatra ny solika. Tsy maintsy ifantohana ny varotra noho izay fanafarana entana izay, ankoatra ny fadintseranana, manampy izany koa ny hetra amin’ny vola miditra ho an’ny fanjakana. Misy ny fepetra noraisin’ny fanjakana amin’ny fanatsarana ny fitantanana ny ladoany. Havaozina, ohatra, ny haban-tseranana amin’ny vokatra sy ny fitaovana sasany. R.Mathieu JID* : Journée Internationale de la Douane L’article Fadintseranana – JID*: hampiditra 2869,1 miliara Ar, taona 2021 a été récupéré chez Newsmada.